Ithegi: Iimpawu eziphambili zokusebenza | Martech Zone
Ithegi: izikhombisi zokusebenza eziphambili
Iimpazamo eziqhelekileyo zoShishino zenza xa ukhetha iqonga lokuzenzekelayo
NgoMvulo, Novemba 30, 2020 NgoMvulo, Novemba 30, 2020 UBob Croft
Iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa (i-MAP) yiyo nayiphi na isoftware ehambisa imisebenzi yentengiso. Amaqonga ahlala ebonelela ngeempawu zokuzenzekelayo kwi-imeyile, kwimidiya yoluntu, ukukhokelela kuhlobo, iposi ethe ngqo, amajelo entengiso edijithali kunye nabalamli babo. Izixhobo zibonelela ngesiseko sedatha yokuthengisa kulwazi lokuthengisa ukuze unxibelelwano lujolise ekusebenziseni ukwahlulahlula kunye nokwenza ubuqu. Kukho ukubuya okuhle kutyalo-mali xa amaqonga entengiso azenzekelayo esetyenziswe ngokuchanekileyo nangokupheleleyo; Nangona kunjalo, amashishini amaninzi enza iimpazamo ezisisiseko
NgoMvulo, Julayi 29, 2019 NgoMvulo, Julayi 29, 2019 YaseRoma Kumar Vias
Bambalwa kakhulu abakholelwa ukuba isicwangciso esiliqili sokuthengisa sinokunciphisa iindleko zomkhankaso wentengiso ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70. Kwaye akufuneki ukuba ibandakanye iingcali. Kweli nqaku uza kufunda ukuba ungalwenza njani ngokwakho uphando lwentengiso, ujonge abo ukhuphisana nabo kwaye ufumanise ukuba yeyiphi na into abayifunayo abaphulaphuli. Isicwangciso esiliqili sinokunciphisa iindleko zokuthengisa ukusuka kwi-5 yezigidi zeedola ukuya kwi-1-2 yezigidi. Ayisiyonto intle, oku kukude kwethu
Ungakuphucula njani ukunyaniseka kwabaThengi ngeNtengiso yeDijithali
NgoLwesihlanu, Oktobha 19, 2018 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 UNina Ritz
Awungekhe uyigcine into ongayiqondiyo. Xa kugxilwe ekufumanekeni kwabathengi rhoqo, kulula ukuba ihanjiswe. Kulungile, ke uqikelele isicwangciso sokufumana, uyenzile imveliso / inkonzo yakho ukuba ilingane kubomi babathengi. Isindululo sexabiso sakho esisodwa (UVP) siyasebenza-sikhohlisa ukuguqulwa kunye nezikhokelo zokuthenga izigqibo. Uyazi ukuba kwenzeka ntoni emva koko? Ungena phi umsebenzisi emva kokugqitywa komjikelo wentengiso? Qala ngokuqonda abaphulaphuli bakho nangona kunjalo